यसरी लेख्न सकिन्छ थेसिस (पाठ–१) – Tesro Ankha
2526 पटक पढिएको
थेसिस लेख्ने तरिका थाहा नहुँदा कतिपय विद्यार्थी अन्योलमा हुन्छन् । नियमित कक्षा नलिएका उनीहरूलाई लेख्न तरिका थाहा नहुँदा वर्षौंसम्म थेसिस पूरा गर्न सक्दैनन् । उनीहरूको समस्या बुझेर शिक्षाविद् डा. मनप्रसाद वाग्लेले थेसिस लेख्ने तरिका यसरी सुझाएका छन् ।
रिसर्च प्रपोजल कसरी तयार पार्ने ?
थेसिसको प्रपोजल लेख्नेक्रममा केही विद्यार्थी तनावमा देखिनु अस्वाभाविक होइन । यसलाई तनावका रूपमा नलिई निर्माणात्मक प्रक्रियाका रूपमा बुझ्नु उचित हुन्छ । वास्तवमै यो कठिन कार्य हो । तर, जब तपाईं आफ्नो प्रपोजलमा सफल हुनुहुन्छ, थेसिसको झन्डै ५० प्रतिशत काम पूरा भएको ठान्दा हुन्छ ।
प्रपोजल तयार पार्दा धेरैलाई केमा रिसर्च गर्ने भन्ने टाउको दुखाइ हुन्छ । जुन क्षेत्रमा आफ्नो बलियो पकड छ, त्यसैलाई समात्न सक्नुभयो भने सजिलो हुन्छ । यदि तपाईं माध्यमिक शीर्षक विद्यालयमा विज्ञान पढाउनुहुन्छ भने तपाईंको शीर्षक माध्यमिक विद्यालयको विज्ञानसँग सम्बन्धित समस्यामा आधारित गराउन सके तनाव स्वाट्टै घट्न सक्छ ।
त्यसपछि कुन समस्या लिने भन्नेमा जानोस् । पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तक वा शिक्षण सिकाइ वा मूल्यांकन वा कक्षा व्यवस्थापन अथवा तपाईंले अनुभूत गर्नुभएको अन्य कुनै समस्या र त्यसपछि तपाईंको थेसिसले उक्त समस्यामा अनुसन्धान गरेर कस्ता–कस्ता प्रश्नको उत्तर खोजेको हो, विचार गर्नुहोस् । ती प्रश्न नै तपाईंको रिसर्च क्वैसन हुन् । उदाहरणका लागि यदि तपाईं माध्यमिक तहको विज्ञान विषयमा किन विद्यार्थी बढी असफल हुन्छन् भन्ने पत्ता लगाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईंको एउटा रिसर्च क्वैसन ‘ह्वाट आर द रिजन बिहाइन्ड स्टुडेन्टस्, फेलर इन सेकेन्डरी स्कुल साइन्स सबजेक्टस्’ हुन सक्छ । यो क्वान्टिटेटिभ रिसर्चको नमुना भयो ।
२०७४ आश्विन २४ २३:५६
रामकुमारको रामलीला : मै
पत्रकारसँग होइन, आफैंदेखि डराऊँ
जनप्रतिनिधि–कर्मचारीका कारण संघीयता धरापमा